Sary an-tsary Landscape ho an'ny Android | Androidsis
Ny tanàna mahavariana indrindra, ny morontsiraka nofinofy tsara indrindra na ny sary an-tendrombohitra mahavariana indrindra dia miandry anao ao amin'ity faritra misy ny sary masiaka amin'ny finday Android anao ity. Sehatra manaitra izay nofinofisinao ho afaka hihaona mivantana, izay hanovana ny fisehoan'ny findainao Android amin'ny fomba tena tsotra.
Jereo ireo landscapes rehetra amin'ny karazana hitanao ato amin'ity galeriana ity. Azo antoka fa misy ambadika mifanentana tsara amin'ny telefaona Android anao. Raha mitady ny sary an-tsary miaraka amin'ny sary miavaka ianao dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny fiavian'ity fizarana ity.
Aza miandry intsony ary sintomy ny fondos de pantalla de toerana manodidina manaitra indrindra ho an'ny Android anao. Amoron-dranomasina, tanàna na tendrombohitra, ny fifidianantsika sary masiaka dia hitarika anao any amin'ny toerana tsy mampino, mba hahafahanao mankafy azy ireo isaky ny mamadika ny efijery finday na tablette misy anao ianao.
Raha mila bebe kokoa ianao rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny takelaka na finday, ao amin'ilay rohy izay napetrakay teo dia ho hitanao izy ireo.